Ebe a na-asa ahụ -lọ Mpekere High-Arc batrị Faucet
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / N'ihe gbasaa 2-edozi High-Arc Bathroom Foset Chrome
Ebe a na-ahụ anya 2-Aka Arc Bathroom Faucet Chrome
V nweta ihe nlere nke ime ụlọ ịwụ ahụ site na iji ejiji mara mma, ụzọ abụọ a ejiri ọla ọcha gaa ebe ị na-ahụ maka ụlọ ịsa ahụ ga-enye gị mma ịsa ahụ.
Ntụziaka nwụnye 2321300C
Kachasị mma mma ụdị mma okirikiri nhọrọ ukwuu: ọla kọpa siri ike igwe anaghị agba nchara ụlọ ịwụ ahụ 2321300C. Njedebe Chrome nwere ike iguzogide corrosion. Akwa mkpuchi seramiiki na mmiri na-azọpụta mmiri mmiri neoperl. Mbido okpukpu abụọ maka nhazi nke mfe na njikwa mmiri. (biko tulee nha nke aka gị tupu inye iwu)
ihe okike, ngwa ngwa ejikọ teknụzụ: ụlọ ngwa ngwa njikọ mbụ ngwa ngwa dị mfe maka ịwụnye n’onwe gị n’enweghị eriri ọkpọ. Chekwaa ụgwọ ntinye osisi na faucet osisi. Oghere ahụ nwere ike idozi n’elu ihe ndị ị chọrọ. Flọ dabara n'ụlọ, mgbazinye ụlọ ọhụụ, ụlọ na-akwụghị ọtọ, ebe a na-anya ụgbọ ala, ebe na-adọkpụ njem na ojiji ụlọ.
Mee nhazi abụọ maka mmụba dị mfe na njikwa mmiri. Flọ dabara n'ụlọ, mgbazinye ụlọ ọhụụ, ụlọ na-akwụghị ọtọ, ebe a na-anya ụgbọ ala, ebe na-adọkpụ njem na ojiji ụlọ.
SKU: 2321300C Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: ime ụlọ ịsa ahụ, ijikwa ebe niile, chrom chinechara
12.1 x 8.5 x 3.1 sentimita
Azụrụ m pọmpụ a n'ihi na ọ bụ otu n'ime ụdị dị ọnụ ala ya dị, mana ịdị mfe nrụnye bụ ihe kpatara m ga-eji zụta ya ọzọ. Mgbe ị wụnye ihe ndị ahụ, a na-eme ka ha sie ike site na kposara ndị ejikọtara na mkpụrụ kama ime ka mkpụrụ ahụ sie ike, nke na-ewepụ ihe mgbu nke ịnwa ịmegharị mkpịsị aka ogologo na ebe dị mkpagide n'okpuru sink. N'otu aka ahụ, eriri ahụ achọghị ịgbagọ ma ọ bụ tụgharịa iji tinye, kama ọ na-adaba na ngwa ngwa.
Nanị ihe m nwere bụ na nsị nsị adịghị mfe ịwụnye karịa ihe ọ bụla ọzọ, nakwa na nkedo rọba ahụ yiri ka ọ dị ntakịrị ọnụ ala ma nwee ike ịdị na-agwụ ike ma na-agbaji afọ ole na ole, ma ihe niile dị mma ugbu a . Maa kwadoro nke a maka ịdị mfe nke nrụnye naanị.
Enwere m mbadamba nkume ahụ ma na-achọ ụzọ akụ na ụba isi eji akwa ụlọ ịsa ahụ. Ihe ọkpọkọ ndị a bụ nhọrọ magburu onwe ya. Ha dị mfe iji wụnye ma rụọ ọrụ mara mma. Ihe mgbochi mmiri nke mbụ buru ibu maka nsị m iji mee ka mmiri niile gbapụ nke ọma. Agwara m ha ma ha zipụrụ m obere ndị nnọchi. Ngwaahịa a bụ ezigbo uru ma ọrụ ha enweghị oke.
Nke a bụ ezigbo foset dochie m ụlọ ịwụ sink. O nwere udiri ihe mara nma. Echere m na aka ndị ahụ ga-etolite ogologo, ma ozugbo m jiri ha ugboro ole na ole, ha dị ka ha ziri ezi. Di m wụnye ihe niile dị mfe. Amaghị m banyere atụmatụ mgbapụta popup, mana m masịrị ya karịa ụdị mpempe akwụkwọ mmiri ochie. Ọ na - eme ka ihe ọ bụla dị mfe. M nwere ihe na-egbu maramara chrome imecha na m hụrụ ya n'anya. Ọnụahịa ahụ dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ m lere anya. Ana m atụ anya ịnụ ụtọ nke a ogologo oge.
Anyị na-etinye usoro 2 nke ndị a n'ime ụlọ ịsa ahụ nna anyị ukwu. Ihe ndị ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ha na-adị mma ma dị mma. Ha ga-abụ okpukpu abụọ na Lowes, wdg.
Ihe ọkpọkọ mmiri na-eweta n'oge ma dị mfe ịwụnye. O were m oge iwepụ nke ochie karịa ịwụnye ọkpọkọ ọhụrụ.
Igwe mmiri a bụ maka ime ụlọ ịwụ na ime ụlọ nnabata. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ngwaahịa nke ngwaahịa maka ọnụahịa ahụ
Ejiri oke oke elu rụọ ọkpọ mmiri a. Ọ na-adị arọ dị ka aha aha dị oke ọnụ. Abịa na akụkụ niile dị mkpa maka ntinye. Ọ bụrụ na arụnyere ya maka izu gara aga ma rụọ ọrụ dị ukwuu ruo ugbu a! Ga-emelite ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla gbanwere.
Nke a ọkpọkọ mara mma! Ọ bụ nnukwu mma ma na-arụ ọrụ dị ukwuu! Ọgba aghara emewo ka m nwee obere mgbagwoju anya mana m ka nwere ike iwunye ya!
M hụrụ n'anya nke a foset! Amaghị m mgbe m nyere ya iwu na spout nwere ike ịtụgharị, nke bụ ezigbo akụ bara uru!
A *** a2020-06-19
Hụ ọhụụ ọhụrụ ahụ maka ụlọ ịsa ahụ anyị rụzigharịrị ọhụrụ! Ọgbara ọhụụ na nke mara mma.
M hụrụ n'anya nke a foset. M zụtara abụọ na ha abụọ dakọtara na ime ụlọ ịwụ dị iche iche. Ọ dị ọnụ ala ma sie ike. Mmiri gbapụta na-arụ ọrụ dị mma ma ọ dị mfe ịwụnye. Ọ dị mfe ihicha ma mara mma nke ukwuu!
Enweghị m ike ịgbanye isi m ọnụahịa nke ọkpọkọ mmiri a na etu o si dị mma ma mara mma. Anyị na-ele ndị yiri ya anya na Home Depot na Lowe maka ihe karịrị okpukpu abụọ karịa ọnụahịa ahụ. Nke a bụ nke mbụ atọ mpempe akwụkwọ mgbokwasị m arụnyere na ọ bụ ya mere ridiculously ngwa ngwa. Akụkụ kachasị sie ike bụ ịmegharị ihe niile ma jide n'aka na mpempe atọ ahụ kwekọrọ n'ụzọ zuru oke. Dabere n'ogo ogologo ọkọnọ ị na-eji ị nwere ike ijikọ ndị ahụ tupu ịpị ọkụ ma ọ bụ oyi n'ime ebe, naanị hụ na ị nwere iberibe iji mee ka ha sie ike. M n'eziokwu enweghị m ike ikwu oke ihe banyere nke a. Ọ bụ nnukwu ihe na 100% kwesịrị penny ọ bụla !!
Azụtara m n'oge na-adịbeghị anya & wụnye ọkpọkọ a dị ka akụkụ nke ime ụlọ ịsa ahụ. Obi dị m ezigbo ụtọ na mkpebi m ịzụta ụdị a / ụdị maka ndị ọzọ m lere anya ma tụlee. Igwe mmiri ahụ mara mma na ọdịdị, na-arụ ọrụ na-enweghị ntụpọ ma na-eche echiche nke ọma na 'nhazi na nrụpụta ya. Usoro ntinye ngwa ngwa bụ ezigbo gbakwunye ma mee ka nrụnye dị mfe. Ahụghị m leaks ma ọ bụ nsogbu ọ bụla n'oge awụnyere, ma ọ bụ ebe m malitere iji ọkpọkọ mmiri. Ọ bụ ezie na a na-enye mwepu pop-up, ebe ọ bụ na a na-eji ụlọ ịsa ahụ a eme ihe kwa ụbọchị, ahọrọ m maka nsị dị iche na nkata ngwa ngwa na-ewepụ ngwa ngwa. Achọrọ m ịwụnye mmapụta a na-eweta na ime ụlọ ịsa ahụ ọzọ na-adịghị eji eme ihe n'ọdịnihu.
Ndị a mara mma na ime ụlọ ịwụ ahụ. Anyị dochiri oge ochie anyị nke 1978 na ndị a na ọdịiche dị iche. Nrụgide ahụ siri ike, na nnukwu elu na-eme ka ọ dị mfe itinye ihe n'okpuru nsị. Ihe dị mfe nke nrụnye ahụ mekwara ka m hụ ihe ọkpọ mmiri ndị a n'anya.
Ochie Moen si na ụlọ ịwụ ahụ kwụsịrị ma malite ịba ụba- enweghị mmezi. Achọrọ mgbanwe dị ọnụ ala. Enwere m nchegbu banyere nke a, n'ihi na ọnụahịa dị ala. O juru m anya mgbe ọ bịarutere. Ọ dị oke mma na ntuziaka ndị ahụ dị mfe ịgbaso ma ọ dị mfe ịwụnye (ọbụlagodi mgbe m nwere nwamba na-awụlị gburugburu m). Enwetara m email site na WOWOW iji jide n'aka na ọ baara m uru. Obi dị m ezigbo ụtọ na nzụta
Mgbe m meghere nnukwu nkwakọ ngwaahịa mbụ m chere na ọ dị ọcha, nnukwu ngwụcha, njikọ njikọ ọla, siri ezigbo ike… sị na nke a bụ naanị otu izu ka enweghị ahụmịhe ogologo ndụ ya, mana m hụrụ ya n'anya
Enwere m obi abụọ mgbe m na-enye iwu maka nke a n'ihi ọnụahịa ahụ. Enyere m iwu 2 maka nna m ukwu bat. Ọ dị oke mma!! Ha mara mma ma sie ike. Okpukpo m masịrị nke ukwuu. Dị ka nke ugbu a, m ga-ukwuu nwere ike ikwu!
Nke a bụ iji dochie ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ ochie. Anaghị m atụ anya ụdị ihe mara mma! Ọnụahịa ahụ dị mma, ya mere enwere m obi ụtọ. Echichi bụ ikuku. O were oge iji sụpụta ya. O were oge karịa iwepu nke ochie. Nke a bụ nnukwu ịzụta!
Ọ mara mma ans mfe iji wụnye. Ihe osise dị na nkọwa ngwaahịa a na-amasị m, nke na-enye m obi ike na ọ ga-adabara akụkụ pọmpụ dị ugbu a na ime ụlọ ịwụ ahụ m. Ọ na-arụkwa ọrụ dịka atụ anya ya. Echiche zuru oke zuru oke.
Anyị zụtara pọpụlii a nke ime ụlọ ịwụ kama Moen ma ọ bụ Delta n'ihi ọdịiche ọnụahịa yana ọfụma. Ya a mara mma nke ukwuu na-achọ ọkpọkọ na-arụ ọrụ nke ọma dị.
Obi dị gị ezigbo ụtọ na ogo na ngwụcha nke pọmpụ a. Dị ka ọ dị mma ma ọ bụrụ na ọ bụghị nicer karịa nnukwu aha ụdị na dị ọnụ ala karịa.
Zụta ụrọ a dị ka onye nnọchi. Mfe iji wụnye. Nwere ọmarịcha anya nke oge a. Mfe ọcha. Akụkụ dị n'ime ọla. Hụ pop elu igbapu. Nwoke m kwuru na e wuru ya karịa ọkpọkọ mmiri ochie anyị.
Awụnye ọkpọkọ abụọ n'otu elekere. Ha mara ezigbo mma. N'anya na push stopa a gụnyere na mmiri ọkọnọ ahịrị. Ruo ugbu a ngwaahịa a bụ ezigbo uru maka ego gị
Hụ ụzọ ndị a n'anya! Na-eme ka ime ụlọ ịwụ ahụ mara mma. Dị mfe iji wụnye ma nwee ọdịdị mara mma nke na-eme ka ha dị ọcha. Ọrụ dị ezigbo ire na oke mmiri.
Nnukwu mmụba na nhazi nke ugbu a azụrụ n'ụlọ. Ntọala ochie na-efu ihe karịrị $ 120 na ebe nchekwa dị ala / ebe obibi. Ihe nlereanya a na-enye ohere ka mmiri dị mma, ihe ọhụụ na ntinye dị mfe na ọnụahịa nwere ezi uche. Ogo yiri ka ọ dị mma!